७ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १७:११
छाँया सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठले केहि स्वार्थका साथ नकरात्मक प्रचारको उत्कर्षमा पु¥याउन खोजिएको बताएका छन् । राज्यले निर्दिष्ट गरेको नियमको अधिनमा रहेर गरिएको अर्बौ रुपैंयाको लगानीमा नियोजित रुपमा आक्रमण थालिएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौ । ठमेलमा सञ्चालनमा रहेको छाँया सेन्टरले कानुन नमिचेको दावि गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक जग्गा मिचेर छाँया सेन्टर निर्माण गरेको भन्दै स्थानीयहरुले विरोध गरेपछि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुन नमिचेको स्पष्ट पारेको छ ।
छाँयाँ सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठले केहि स्वार्थका साथ नकरात्मक प्रचारको उत्कर्षमा पु¥याउन खोजिएको बताएका छन् । राज्यले निर्दिष्ट गरेको नियमको अधिनमा रहेर गरिएको अर्बौ रुपैंयाको लगानीमा नियोजित रुपमा आक्रमण थालिएको उनको भनाइ छ ।
उनले छाँयाँ सेन्टरको विरोध गरेर विदेशी लगानी असुरक्षीत गर्न थालिएको समेत टिप्पनी गरेका छन् । सेन्टरले स्वदेशी लगानीकै सुरक्षा नभइरहेको अबस्थामा विदेशी लगानी ल्याउन झन कठिन हुने बताएको छ । सरकारले आगामी चैतको १५ र १६ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
स्वदेशी लगानीमा बनेका पूर्वाधार तथा आयोजनामा केही ब्यक्तिको स्वार्थकले आक्रमणको प्रयास हुन थालेपछि स्वदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न असुरक्षित भएकोमा आफुहरु चिन्तित भएको जनाएको छ । छाया सेन्टर गत २५ डिसेम्बरदेखि संचालनमा आएको छ । सो आयोजनामा ३ दर्जनभन्दा बढी स्वदेशी लगानीकर्ताको लगानी रहेको छ ।
‘सरकारी निकायबाट पुरा गर्नु पर्ने सबै प्रकृया सकेर निर्माण गरिएको छाँया सेन्टरलाई एकाएक किन आक्रमण गरिँदैछ ? जग्गा किनेको ६ वर्ष पछि कम्प्लेक्स निर्माणको काम थाल्नु पहिले अहिले हल्ला गर्नेहरु किन मौन बसे ? हामीले २ वर्ष लगाएर वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन तथा सार्वजनिक सुनुवाई गरेर छिमेकी तथा साँधसँधियारसँग सम्झौता गरी निर्माण थालिएको आयोजनालाई अहिले धारे हात लगाइनु आश्चर्यको विषय बनेको छ ’ श्रेष्ठले भने । ‘पहिले सिधै चन्दाको विषय आउँथ्यो अहिले गलत प्रचारबाट स्वार्थ पुरा गराउने समुहहरु हाबी भएको कुरामा दुई मत छैन । समयले त्यस्ता व्यक्तिलाई आफैं परिचित गराउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
यस्तो छ तथ्य
काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ मा रहेका कित्ता नम्बर १६१८ को ९ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम, कित्ता नम्बर १०४० को ९ आना २ पैसा ३ दाम, कित्ता नम्बर १६१६ को २ रोपनी १० आना र कित्ता नम्बर १६१७ को ६ आना जग्गा जग्गा सिंह सार्थ गरुड भगवान बहाल गुठीबाट विभिन्न व्यक्ति हुँदै अम्बिका राणको नाममा नामसारी रैतानी दर्ता भएको देखिन्छ ।
त्यस पछि २०७० बैशाख २० मा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट रोक्का राख्न नमिल्ने भनी विपक्षको नाममा आदेश भएको थियो । फेरी सर्वोच्च पुगेका उनीहरुलाई सर्वोच्चले २०७३ असार २० मा रोक्का राख्न नमिल्ने भन्ने नै आदेश गरेकोे थियो । फेरी पनि सर्वोच्चमा सोही विषयलाई लिएर पुगेकाहरुलाई सर्वोच्चले २०७१ कात्तिक २ गतेका दिन रोक्का राख्न नमिल्ने भनी विपक्षका नाममा नै आदेश दिएको थियो ।